Pejy 4 - 5 Hadino WWE Toe-tsaina Era Superstars ary aiza izy ireo izao? - Wwe
# 2 Don Callis (The Jackal)
Don Callis nandritra ny fahazazany
Eny, io ihany ilay Don Callis, izay miasa ankehitriny ho mpitsikera ho an'ny New Japan Pro Wrestling sy ny Impact Wrestling, ary koa.
Tamin'ny volana septambra 1997, Don Callis dia nanao ny laharam-pahamehana ho an'ny WWF ho mpikambana ary farany dia mpitarika ny vondrona fantatra amin'ny anarana hoe The Truth Commission. Nandritra ny famelabelarany ny gimikick an'i Jackal, i Don Callis dia nifaninana tamin'ny lalao tokana tamin'ny Shotgun Saturday Night sy nandritra ny WWF House Shows.
Taorian'ny nijanonany tamin'ny WWF, izay naharitra hatramin'ny taona 1999, dia nitsambikina tany amin'ny ECW i Callis taty aoriana fa i Cyrus The Virus ary taorian'ny nijanonany ho mpilalao an-tsokosoko dia nantsoin'ilay Tompondaka Iavy Heavyweight teo aloha teo ho eo ihany izany tao anatin'ny faribolana efa-joro. ary tamin'ny farany dia nanangana ny tenany ho iray amin'ireo mpaneho hevitra malaza eran-tany.
Callis, izay miasa ankehitriny ho mpivaofy teny amin'ny NJPW English, dia azo inoana fa iray amin'ireo tsara indrindra tamin'ny zavatra nataony ary tamin'ny 2017, ny Kanadiana dia lasa filoha lefitra mpanatanteraka vaovao an'ny Impact Wrestling ary nitondra ny fampiroboroboana ho any amin'ny toerana vaovao.
HIVERINA Efatra DimyMANARAKA
fomba tsara indrindra hanelingelenana ny narcissist
seth rollins sy becky lynch
lazao amiko ohatra mahaliana momba ny tenanao
ny fomba ho be fitiavana kokoa amin'ny fifandraisana
famantarana fa misy lehilahy mpiara-miasa aminao milalao